FAROOLE: Yaan la igu mashquulin anigu dhibaato uma wado Puntland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
FAROOLE: Yaan la igu mashquulin anigu dhibaato uma wado Puntland[Sawirro]
GAROOWE – Madaxweynihii hore ee Puntland hadana ah Xildhibaan ka tirsan Aqalka sare Baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe.
Senator Cabdiraxmaan Faroole oo ay soo dhaweyn u sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa marka uga mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen imaatinkiisa.
Cabdiraxmaan Faroole oo Saxaafada kula hadlay gurigiisa ayaa ka digay in faro-gelin lagu sameeyo qorshayaasha Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaan ka digayaa in farogalin lagu sameeyo qorshayaasha Madaxweynaha cusub gaar ahaan xukuumadda uu soo dhisi doono, waxaana madashii fashilantay iyo waxa ay wateen ugu baaqay inuu ninkaas ka ammaan helo oo faraha looga qaado arrimahiisa’ayuu yiri.
Faroole ayaa waxa uu sheegay in Puntland uusan dhibaato u wadin isla markaana aan lagu mashquulin.
Warar waan maq-maqlayay, waxaanse idiin sheegayaa inaan aniga la igu mashquulin, cidna xumaan uma wado xumaanna waligay kama shaqayn wanaag farid ma ahane”ayuu yiri.
Mar ay saxaafadu weydiisay in Puntland u yimid isaga iyo rag looga soo guuleystay doorashadii ama ka haray carqaladeynta nidaamka ee xukuumadda Cabdiweli Gaas ayuu sheegay iney haba yaraate waxba ka jirin.
Warkaas waxba kama jiraan, ciddii sheegtayna waad cid baqdin qabta, waxaase la idin ka rabaa inaad idinku weydiisaan oo la xisaabtamaan Xildhibaanadii doortay”ayuu hadalkiisa ku daray.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa ugu danbeyn soo jeediyey in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso loogu magac daro AUN Madaxweynihii ka horeeyey Gen.Cadde Muuse Xirsi maadaama uu isagu ahaa maskaxdii aasaaskiisa ka danbeysay.